Uthando, isondo, i-Intanethi kunye noMthetho-Isiseko soMvuzo
Ikhaya Uthando, ubulili, intanethi kunye noMthetho
Uthando, isondo, i-Intanethi kunye nomthetho zinokunxibelelana ngeendlela ezinzima. Isiseko soMvuzo sinokukunceda uqonde ukuba umthetho uthetha ntoni kuwe nakusapho lwakho. Nantsi intetho enomdla yeTEDx, Isini, amanyala kunye nobudoda nguprofesa wezomthetho waseMelika kunye nomama, uWarren Binford ojoyina amachaphaza.
I-teknoloji yenza ukuba kudalwe kunye nokutshatyalaliswa kwemifanekiso yesondo kuvuleleke kubani na abane-smartphone, kuquka nayiphi na umntwana. Ukunyuka kweengxelo zolwaphulo-mthetho ngokwesondo kunye nendlela 'yokunyamezela' kwindlela yamapolisa kunye nenkonzo yokutshutshiswa kuye kwabangela ukuba inani lamanani alitshutshiswa. Ukuxhatshazwa kwabantwana ngokusondeza ngokwesondo kuphezulu.
E-UK, umntu onemifanekiso evusa inkanuko yesini yabantwana (nabani na ongaphantsi kweminyaka eli-18) angabekwa ityala lolwaphulo-mthetho ngokwesondo. Oku kubandakanya kwelinye icala lesiphelo, abantu abadala bakhuthazwa ukuba bafune ukunxibelelana ngokwesondo nabantwana ukuya kulutsha olwenzayo kunye nokuthumela ze 'selfies' ze okanye ezize ze kwiminqweno enokubakho yothando, kunye nokufumana kwabo imifanekiso.
Kweli candelo kumthetho Isiseko soMvuzo sijonga le micimbi ilandelayo:
Ukuthumelelana imiyalezo nemifanekiso yamanyala phantsi komthetho waseNgilani naseWales